China oluzenzekelayo Horizontal Ukuphawula kunye nokupakisha System Ukwenziwa kunye Factory | I-S-conning
Isisombululo esifanelekileyo sokuphawula iileyibhile kunye nomatshini wokupakisha kumzi mveliso wamayeza.
ISICELO: Isisombululo esifanelekileyo sokuphawula iileyibhile kunye nomatshini wokupakisha kumzi mveliso wamayeza.
-Isebenza kwiintlobo ezahlukeneyo zeebhotile, ezinje ngeebhotile zomlomo zomlomo, ii-ampoules, iibhotile ze-schering kunye ne-pen-injectors, njl.
Isantya sokusebenza esisebenzayo ukuya kwiibhotile ezingama-600 ngomzuzu.
- kudityaniswa neelebheli kunye netreyi yokufaka kunye nebhokisi yegalelo (ngokuzithandela）, umatshini uvumela ulawulo lweqela, imisebenzi ekrelekrele kunye nokusebenza okuphezulu;
-Isebenziseka kwiintlobo ezahlukeneyo zeebhotile, ezinje ngeebhotile zomlomo zomlomo, ii-ampoules, iibhotile ze-schering kunye ne-pen-injectors, njl.
Izinga lokulungiswa kwegalelo liphezulu kune-99.9%; Isantya esizinzileyo somgca wonke: malunga neebhotile ezingama-500 / ngomzuzu;. Umgangatho wokulimaza ungaphantsi kwe-1 / 100,000;
Inkqubo yokungenisa ngaphakathi kwiibhotile zokufaka kunye nokudlulisa indlela, ukuqinisekisa igalelo elichanekileyo nelizinzileyo lebhotile;
Itekhnoloji yokuqonda ekrelekrele yamkelwe ukuze ihlole amandla atyholayo; Inkqubo ekhethekileyo yeTeflon isetyenziswe kumgaqo kaloliwe we-U buffer, eqinisekisa ukuba akukho kungqubana komzimba webhotile, ukufakelwa kwebhokisi ekugudileyo, akukho monakalo kwiibhotile kunye neelebheli. Igalelo lebhokisi liyaqhubeka kwaye lizinzile. Akukho bhotile ayondli ibhokisi, akukho ibhokisi akukho galelo lebhotile;
Inkqubo yokuhlola enobukrelekrele, kunye neelebheli yesantya sokuziva okuzenzekelayo kunye nohlengahlengiso ngokwemeko yokubonelela kwebhokisi;
Sinikela ngaphezu kokuba ufuna
Magazine Iphephancwadi lesikhongozeli sokufaka itreyi: Uyilo loqhagamshelo olungenamthungo lwenza izikhongozeli ezinombhalo zifakwe ngaphakathi
itreyi yesiseko ngokutyibilikayo. Imagazini ye-buffer yesikhongozeli ine-alamu yokugcwala okukhulu.
Inkqubo eqhutywa yiServo yokufaka izikhongozeli kwiitreyi: Ukuhamba okungaginyisi mathe nokukhupha ngomxhuzulane
iibhotile zihamba kakuhle ngaphandle kokuxhathisa; ukufakwa kwe-roller fortray efakwe ngokupheleleyo kwi-servo kwenza isenzo sichaneke ngakumbi.
Inkqubo yokucinezela yeDynamic: Ukufaka iibhotile kwitreyi ngobunzima bayo kwenza yonke inkqubo igqibelele
Indawo yokupakisha yeBhotile ye-S616 eguquguqukayo ixhotyiswe ngetekhnoloji yolawulo lwenetcon entsha kunye neyona ikhawulezayo (ukhetho). Ngokucofa nje isikrini sayo esinye sokuchukumisa, unokuhlengahlengisa ngokulula useto olwahlukeneyo lweemfuno zemveliso yakho.
Incwadana yokusebenza eyakhelweyo: abaqalayo bangafunda kwisiboniso sendlela yokusebenzisa oomatshini ngexesha elifutshane. Oku konga imali kunye nexesha ngexesha loqeqesho.
-Umsebenzisi-ohambelana nobude beelebheli yokumisela inkqubo: Ulawulo lwe-HMI lwanamhlanje luvumela umsebenzisi ukuba asete iiparameter zelebheli.
Inkqubo yokuLawulwa kwelebheli isebenzisa ipaneli enkulu yokuthinta isikrini, eqinisekiswe yimigaqo ye-CE kunye ne-UL yokubeka iliso ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo kwenkqubo yokuphawula.
-Le nkqubo ikhethekileyo nenobuchule inokuqinisekisa ukuba ukusetwa kwelebheli kulungiselelwe ngokuchanekileyo kwaye kufakwa kwindawo efanelekileyo.
I-counter -Labeling counter-igcina umkhondo wobungakanani beemveliso ezenziwa ngumatshini.
-Pre-set-counter - ubungakanani bunokubekwa kwangaphambili kwimveliso yemveliso kwaye umatshini uya kuyeka ngokuzenzekelayo njengoko isixa sifunyenwe.
Ukucofa ngokulula isikrini kukuvumela ukuba ulibazise usetyenziso lweelebheli kunye nokuhlengahlengisa indawo yelebheli.
Umzekelo I-S606 S616
Indlela yokuqhuba Inkqubo ye-Simens PLC
Isivuno (ii-pcs / min) 400 ~ 600BPM
Umkhombandlela wokusebenza Ekhohlo okanye ngasekunene
Isantya sokuhambisa (m / min) 40
Ukuchonga iileyibhile ± 0.5 mm
Enobubanzi yangaphakathi ileyibhile roll 76 mm
Sangqa lwangaphandle ileyibhile roll 350 mm (ubuninzi)
Ubungakanani beelebheli ezifanelekileyo Ungenziwa ngemfuneko kuxhomekeke kwimveliso yabathengi
Ubungakanani obufanelekileyo bezinto zokuphawula izinto Ungenziwa ngemfuneko kuxhomekeke kwimveliso yabathengi
Ukusetyenziswa kweprinta 5kg / cm ²
Qaphela (eTshayina) AC220V 50 / 60HZ Isigaba esinye
(Ngaba elicwangcisiweyo iimfuno zabathengi)
Amandla (w) MALUNGA NE-2.5KW
Ubunzima (kg) 500KGS
Ubungakanani boomatshini I-4000 (L) 1600 (W) 1600 (H) mm
Egqithileyo Umatshini wokuPhawula iPlane
Okulandelayo: Ngokuzenzekelayo ukutywina okrelekrele kunye nomatshini wokupakisha (4 ngo-1)
Ngokuzenzekelayo ukutywina okrelekrele kunye nokupakisha ...
Factory Lixabiso Hot China Pharma Production Line ...
Umshicileli weLayibhile yeeBhotile zeJar, Umatshini wokuTywina wePlastiki, Indibano yesirinji kunye neNkqubo yokuPhawula, Umatshini wokufaka iilebheli kwiibhokisi, Phezulu kunye nasezantsi kwelebheli, Umatshini wokuPhawula iBhotile yoRhwebo,